အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သင့်ဘလော့ဂ်၏နောက်ဆောင်းပါးကိုမည်သို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမည်နည်း။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2019 တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 7, 2021 Douglas Karr
ငါသည်ငါ့ရေးသားခဲ့သည်သောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်စာအုပ် လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းကိုပရိသတ်အားကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေခြင်းသည်အခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့်မတူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရှာဖွေသူအသုံးပြုသူသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနေခြင်းသို့မဟုတ်လာမည့် ၀ ယ်ယူမှုကိုသုတေသနပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘလော့ဂ်ကိုတင်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ချက်တစ်ခုစီရှိအကြောင်းအရာများကိုရောစပ်ခြင်းသို့သော့ချက်စာလုံးအချို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။ ဤစာမူကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တိုင်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်သင်အသုံးချနိုင်သောအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များစွာရှိပါသည်။
မင်းရဲ့မင်းကိုငါယူမယ် အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပြည့်အဝ optimized ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်၏ဘလော့ဂ်ဖြစ်ပါတယ် လျင်မြန်စွာ နှင့် မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှု။ ဤတွင် 10 ကိစ္စသင့် site တစ်ခုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကရောက်ခဲ့တဲ့နှင့်ရည်ညွှန်းသောအခါဒြပ်စင် ... အဖြစ်သင့်ရဲ့စာဖတ်သူထိတွေ့ဆက်ဆံလိမ့်မည်ဟုဒြပ်စင်နေသောခေါင်းစဉ်:
စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် - ယခုအချိန်တွင်သင်၏စာမျက်နှာ၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ title tag ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါ သင့်ရဲ့ခေါင်းစဉ် tags ပိုကောင်းအောင် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများ (SERPs) ရှိသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်လိမ့်မည်။ စာလုံးရေ ၇၀ အောက်မှာထားပါ။ စာမျက်နှာအတွက်ကြံ့ခိုင်သော meta ဖော်ပြချက်ကိုလည်းအက္ခရာ ၁၅၆ ခုအောက်တွင်ထည့်သွင်းထားပါ။
ပက်ကျိ Post - သင့်စာမူကိုကိုယ်စားပြုသော URL segment ကို post slug ဟုခေါ်ပြီးဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းအများစုတွင်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ပိုရှည်သော post slugs များကိုရှည်လျားသောအစား၊ အဓိကအားဖြင့်သော့ချက်ကျသောစကားလုံးများဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသော post slugs များသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများ (SERPs) တွင်သင်၏ click-through နှုန်းကိုမြှင့်တင်ပြီးသင်၏အကြောင်းအရာများကိုဝေမျှရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ရှာဖွေမှုများ၌ပိုမိုတိကျသောစကားလုံးများရရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပက်ကျိထဲတွင်ပက်ကျိကိုတိုးမြှင့်ရန်မည်သို့၊ မည်သူ၊ မည်သည့်အချိန်၊
post ကိုခေါင်းစဉ် - သင်၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းသင်၏ post title ကို h1 or h2 tag ဖြင့်ဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည်ခေါင်းစဉ် tag ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အကြောင်းအရာ၏အရေးကြီးသောကဏ္ it's ဖြစ်ကြောင်းသင်အသိပေးသည်။ တချို့ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းများသည်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်နှင့်တင်ခေါင်းစဉ်ကိုအတူတူလုပ်သည်။ သူတို့လုပ်ရင်မင်းမှာရွေးစရာမရှိဘူး။ သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သင်နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးချနိုင်တယ်။
မျှဝေခြင်း - သင်၏အကြောင်းအရာများကို visitors ည့်သည်များဝေမျှနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဖွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်အား chance ည့်သည်များအားအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ထားခြင်းထက်များစွာပိုရောက်လိမ့်မည်။ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်မျှဝေခြင်းခလုတ်များရှိသည်။ ၎င်းမှာအဆင့်များစွာ (သို့) လော့အင်များစွာမလိုအပ်သောကြောင့်သင့်အကြောင်းအရာကိုမျှဝေရန်လွယ်ကူစေပြီး visitors ည့်သည်များကမျှဝေနိုင်သည်။ သင် WordPress တွင်ရှိပါကသင်ကဲ့သို့ကိရိယာတစ်ခုကိုလည်းသုံးနိုင်သည် Jetpack သင်၏ဆောင်းပါးများကိုလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများမှအလိုအလျှောက်ထုတ်ဝေရန်။
ပုံရိပ် - ပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်တန်သည်။ သင့်ရဲ့ post တွင်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပေးအာရုံ feeds နှင့်သင့်သောအကြောင်းအရာများကိုပိုပြီးအစွမ်းထက်စေသည်။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဝေမျှလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ပုံများကိုလူမှုရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်မျှဝေမည်။ သင့်ပုံများကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသောစာသားကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြချက်ဖြင့်အမြဲထည့်ပါ။ thumbnail ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသော post ကိုများနှင့်သင့်လျော်သောလူမှုရေးအသုံးချဖို့နှင့် feed plugins များ shared တဲ့အခါမှာလူတွေကတဆင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းအရာ - တလွှားကသင်၏မှတ်ရဖို့တတ်နိုင်သမျှအကျဉ်းအဖြစ်သင့်အကြောင်းအရာထားပါ။ အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်နှင့်သင်ရှာဖွေလိုသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်စကားစုများကိုနားလည်စေရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုကူညီရန်အတွက်ကျည်ဆန်ရမှတ်များ၊ ခေါင်းစဉ်ငယ်များ၊ စာလုံးမည်းနှင့်စာလုံးစောင်းစာသားများကိုသုံးပါ။ ဘယ်လိုလေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါ သော့ချက်စာလုံးတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချပါ.
စာရေးသူကိုယ်ရေးဖိုင် - သင်၏ရေးသားသူသတင်းအချက်အလက်ရှိခြင်းသည်သင်၏ရေးသားချက်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိတွေ့စေသည်။ လူများသည်လူများ၏ရေးသားချက်များကိုဖတ်လိုကြသည်။ အမည်မဖော်လိုသူသည်ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ပရိသတ်ကိုအဆင်မပြေပါ။ စာရေးသူ၏အမည်များသည်သတင်းအချက်အလက်များ၏အခွင့်အာဏာနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာမျှဝေမှုများကိုတည်ဆောက်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စာကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုဖတ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်တွစ်တာပေါ်ရှိလူတစ် ဦး ကိုမကြာခဏလိုက်နာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သူတို့ထုတ်ဝေသောထပ်ဆောင်းအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်များ - ထင်မြင်ချက်များသည်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူစာမျက်နှာရှိအကြောင်းအရာကိုမြှင့်တင်သည်။ သင်၏ပရိသတ်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်ထိတွေ့ရန်အခွင့်အလမ်းလည်းပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် third-party plugins အများစုကိုစွန့်လွှတ်ပြီး WordPress default အတွက်သာရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ Mobile app များနှင့်ပေါင်းစပ်။ တုံ့ပြန်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။
ခေါ်ရန်ရန်လှုပ်ရှားမှု - ယခုတွင်သင်၏ဘလော့ဂ်တွင်စာဖတ်သူရှိပါကသင်ဘာလုပ်ချင်သနည်း။ သူတို့ကိုစာရင်းပေးစေချင်ပါသလား? download ရယူရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ။ သင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏သရုပ်ပြပွဲသို့တက်ပါသလား။ သင်၏စာဖတ်သူသည်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဆက်ဆံရန်လမ်းကြောင်းမရှိလျှင်သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုအပြုသဘောဖြင့်ပြီးအောင်မွမ်းမံပါ။
အုပ်စုများနှင့် Tags: - တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် visitors ည့်သည်များက နှိပ်၍ သူတို့ရှာနေသည့်အရာကိုမတွေ့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆိုင်သောအခြားစာမူများထားရှိခြင်းသည် the ည့်သည်နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရရှိစေပြီး၎င်းတို့ကိုခုန်ကျော်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ stay ည့်သည်အနေနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သင့်တွင်ရေးသားထားချက်တစ်ခုချင်းစီကိုအနည်းဆုံးတစ်ခုစီသတ်မှတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်သင့်တွင်သတိပညာရှိသောအမျိုးအစားများရှိစေရန်သင်ကူညီနိုင်သည်။ tags တွေအတွက်တော့လူတွေကိုပို့စ်ကိုပို့ပေးမယ့်သော့ချက်စကားလုံးပေါင်းစပ်မှုအတွက် tags တွေထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါလိမ့်မယ်။ tags များသည် SEO အတွက်အထောက်အကူမပြုပါဘူး။
ဤအရေးကြီးသောအရာများအများစုသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းအားတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းများဖြင့်အလိုအလျောက်တည်ဆောက်ထားသည်။ ငါအကြောင်းအရာအပေါ်အချိန်ဖြုန်းပြီးတာနဲ့ငါသော်လည်း, ငါ့ပို့စ်များကိုပိုကောင်းအောင်အချို့အမြန်ခြေလှမ်းများကိုရှောက်သွားပါ:
ခေါင်းစဥ် - စာဖတ်သူနှင့် ဆက်သွယ်၍ သိလိုစိတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ ငါနဲ့မင်းသူတို့ကိုမင်းဒါမှမဟုတ်မင်းနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောနေတယ်!
အသားပေးပုံရိပ် - ကျွန်ုပ်သည် post အတွက်ထူးခြား။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံရိပ်ကိုရှာဖွေရန်အမြဲကြိုးစားသည်။ ရုပ်ပုံများကသတင်းစကားအားအမြင်အာရုံအားဖြည့်ပေးသင့်သည်။
အဆင့်ဆင့် - read ည့်သည်များသည်သူတို့မဖတ်မီစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ခေါင်းစဉ်ငယ်များ၊ အမည်းစက်ပြထားသောစာရင်းများ၊ နံပါတ်များစာရင်းများ၊ ပိတ်ဆို့ထားသည့်ကိုးကားချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသူတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတူးဖော်နိုင်ရန်ငါကြိုးစားအသုံးပြုသည်။
ပက်ကျိ Post - ကျွန်ုပ်သည်စကားလုံး ၅ လုံးအောက်တွင်ကြိုးစားပြီးခေါင်းစဉ်နှင့်အလွန်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်မျှဝေခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ပုံရိပ်ယောင်များ - ငါတတ်နိုင်သမျှပုံများများမျှဝေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုများအတွက် Youtube ကိုမကြာခဏရှာဖွေသည်။ ငါပုံများရှာဖွေရေးနှင့်စာမျက်နှာ optimization အတွက်ကူညီပေးသည်သော dash သုံးပြီးပုံများကိုထိရောက်စွာအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဤပို့စ်အတွက်ကျွန်ုပ်၏အထူးပုံကိုသတိပြုပါ blog-post-checklist.png
links များ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာအတွင်းရှိသက်ဆိုင်ရာပို့စ်များကိုလင့်ခ်များထည့်ရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားသည်၊ သို့မှသာစာဖတ်သူသည်နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
အမျိုးအစား - ၁ သို့မဟုတ် ၂ ကိုသာရွေးရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌အသေးစိတ်ရေးသားချက်များရှိသော်လည်းအသေးစိတ်ကိုရည်မှန်းချက်ထားရန်ကြိုးစားသည်။
Tags: - ကျွန်ုပ်ရေးသားနေသည့်လူများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ထုတ်ကုန်အမည်များကိုငါဖော်ပြသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ post ကိုရှာဖွေရန်လူတွေသုံးနိုင်တဲ့သော့ချက်စာလုံးပေါင်းစပ်မှုများကိုသုတေသနပြုပါမယ်။
meta ဖျေါပွခကျြ - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ post နှင့်ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိဖော်ပြချက်အနည်းငယ်သည်aကထိန်းချုပ်နိုင်သည် meta ဖော်ပြချက်။ အချိန်ယူပြီးသိချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဖော်ပြချက်တစ်ခုကိုရေးပြီးရှာဖွေသူအားသင်၏ဆောင်းပါးအားအဘယ်ကြောင့်နှိပ်ရမည်ကိုပြောပြသည်။
သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်း - ရက်အနည်းငယ်အကြာ၌ကျွန်ုပ်ဖတ်မိစဉ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောမိုက်မဲသောသဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းအမှားအပေါ်စာဖတ်သူမှပြန်လည်မှတ်ချက်ပေးသောအခါရှက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်ခေါင်းကိုမတုန်စေကြောင်းကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ငါတိုင်းနှင့်အတူ post ကိုအတည်ပြုရန်ကြိုးစားပါ Grammarly ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ဖို့ ... မင်းလည်းလုပ်သင့်တယ်။
ငါတစ်ခုချင်းစီကိုဘလော့ Post ကို Publish ပြီးနောက်
ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း - ငါသေချာအောင်လုပ် ပို့စ်များကိုမြှင့်တင် ငါကြိုတင်မြင်ကွင်းနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်၊ hashtags (သို့) ဆိုဒ်များကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားလုပ်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းတိုင်းအတွက်ရေးသည်။
တူရိယာများ Agorapulse ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စီ၏ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအလွယ်တကူစီစဉ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဆောင်းပါးအချို့သည်အလွန်ရေပန်းစားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လစဉ် tweet တစ်ခုစီ၊ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားသောအဖြစ်အပျက်ကြေငြာချက်များနှင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အတိုင်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ငါထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်မည်မျှပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ကြောင်း…လမှယနေ့အထိဖြစ်သည်။
ထုတ်ဖော်: ကျွန်ုပ်သည် Agorapulse အတွက်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်ကြီးပါ။
သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် optimization နှင့်သက်ဆိုင်သောဆောင်းပါးများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည် -
Tags: စာရေးသူကပရိုဖိုင်းကိုဘလော့ဂ်ပို့စ်ဘလော့ဂ် post optimizationအမျိုးအစားအမျိုးအစားစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်အထူးပုံရိပ်ဘယ္လိုဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲပုံရိပ်တွေပြည်တွင်းရေးဆက်သွယ်ရေးသော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှုoptimizationOptimize blog post:စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ပက်ကျိ postthumbnail postpost ကိုခေါင်းစဉ်မျှဝေခြင်းလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်လူမှုရေးခွဲဝေမှုမှတ်သားခြင်းဗီဒီယိုများyoutube က
OSX ရှိ Hosts များ သုံး၍ ဒေသအလိုက် DNS ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသလား။
Demand ကိုခန့်မှန်းပြီးရန်လူမှုမီဒီယာကို အသုံးပြု. လုပ်ငန်းများ: ပက်စီ
24:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 4, 38
23:2012 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 07 တွင်
1:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 13 တွင်
အမျိုးမျိုးသောအမှတ်အသားများနှင့်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီ၏အရေးကြီးသောဤအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သငျသညျ tag ကိုကိစ္စများအပေါ်မှာငါ့ "မိုးအုံ့" အတွေးများကိုအများကြီးတက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်။